Siyaabaha la isu Isticmaal Music Play Google on iPhone, iPad, iPod
> Resource > Beddelaan > Sida loo isticmaalo Google Play Music on iPhone, iPad, iPod
Google Music markii ugu horaysay dib ugu soo laabtay sanadkii 2011 la sii daayay, la is-dhexgalka dambe galay Music Play on Google Play (gaabiyey sida Google Play Music) ee 2012. Google Play Music hayaa isa soo taraysa oo ay adeeg geeyo cusub Google Play Music Dhamaan Access galay kuwo mira dhal u yimid dhowr bilood ka hor . Bal aan ku ururiyo wixii Google Play Music hadda sameyn kartaa.
1. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad geliyaan maktabadda music oo dhan si ay u daruur loo maqli karo ee wax kombiyuutarada iyo toban qalabka.
2. Dhammaan Access waxay bixisaa adeeg geeyo ilaa 18 milyan oo kuwan raadkaygay lacag bil kasta oo ah $ 9.99 a.
3. Waa boosteejo ah oo wax iibsiga music.
Music Play Google waa asal ahaan laga heli karaa oo keliya internetka iyo Android. Maxay ku saabsan madal macruufka ah? Bishaaradayda waa in app rasmiga ah ee Google Play Music for macruufka ayaa beryahan dambe bilaabay. Waa maxay ka badan, waxaa jira laba siyaabood oo kale oo aad ku raaxaysan karaa iyadoo la isticmaalayo Google Play Music on macruufka. Mid ka mid ah waa iyada oo ciyaaryahanka web Play Google ee macruufka. Kale waa aad u download music hore ka Google Play Music iyo Google Play Music Dhamaan Access on your computer ka dibna lagu wareejiyo music in aad iPod, iPhone ama iPad. Bal aan is barbar saddex xal ku xusan, waana wax aad dooratay oo dhan si aad u hesho mid ka mid ah oo kuu shaqeeya.
Ma soo xulay mid ka mid xal in la isticmaalo Google Play Music on macruufka? Aan aragno faahfaahinta xal hoose.
# Xalka 1. Download music free la TunesGo, Google iyo Youtube Music Music ka dhigi doonaa sida aad maktabadda
# Xalka 2. Wondershare AllMyMusic
1. Si toos ah kala soo bixi music ka Google Play Music
2. caqligiisu aqoonsan song info, ay ka mid yihiin farshaxanka album, horyaalka iyo in ka badan
3. Download ku playlists music dhan Google iyo kala tagno wax kasta oo 2 songs si toos ah
Sida loo isticmaalo Wondershare AllMyMusic inay muusikada ka Google Play Music iyo wareejiyo iDevices
Isticmaal xal, uma baahnid inaad wax laga walwalo kharashka ku baxa xog ku saabsan qalabka aad iyo aad weligiisba u sii heli karaa files music ah.
Tallaabada 1. Download iyo rakib downloader music this
Ku rakib barnaamijkan on your Mac. Waa arrin aad loo soo dajiyo barnaamij iyo in aad kala socon kartaa saaxir ah in ay si deg deg ah ku dhammeeyo. Markaas aan bilowno barnaamij si aad u hesho diyaar.
Tallaabada 2. Start inay muusikada ka
Waxaad ka heli doontaa oo cas oo Record button ee bidixda xagga kore. Riix badhanka si aad u hesho diyaar. Play All music Access aad Mac. Ilaa iyo inta waxaa sanqadhaya aad Mac, barnaamijkan ku bilaaban doono si ay u qoraan dhawaaqa.
Tallaabada 3. Saxiixa music si ay Lugood
Ka dib music la soo bixi, dooro music ee tab Maktabadda iyo riix dar Lugood in badhanka hoose in aad ku darto oo dhan music si ay Lugood. Markaas furaysto in qalabka macruufka iyo hagaagsan music ka soo bixi Lugood.
# Xalka 3. Google Play Music app ee macruufka
Google app Music Play ee macruufka waa app-ka rasmiga ah la bilaabay by Google. Waxaa loogu talagalay si aad u ogaado, ciyaaro oo wuxuu ku raaxaysan music aad u jecel. Iyadoo rukun si Google Play Music Dhamaan Access, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u sii qulquli 18 milliion kuwan raadkaygay iyo inta uu xiriir aad internet waa available.You kaliya u baahan si loo soo dajiyo app this on qalab aad, ka dibna bilaabaan in ay ha u maareeyaan maktabadda music aad si fudud oo raaxaysan music aad rabto iyada oo adeeg All Access.
Ku rakib Google Play Music for macruufka >>
# Xalka 4. Google Play ciyaaryahan internetka ee macruufka
Waxaad ka heli kartaa helitaanka Google Play Music on macruufka iyada oo loo siiyaa biraawsarkaaga mobile. Halkan waa hage u fudud.
Talaabada 1: fur biraawsarkaaga mobile iyo booqo play.google.com/music.
Talaabada 2: gasho xisaabtaada Google. Haddii ay maya tahay, diiwaan mid lacag la'aan ah.
Talaabada 3: Google Play Music si toos ah u hagaagsan doonaa heesaha oo dhan ah ee xisaab, in qalab aad.
Talaabada 4: Waxaad hadda ka ciyaari kara music ee maktabadda. Haddii aad heshiiska si All Access, waxa kale oo aad sii qulquli karaan ilaa 18 milyan oo kuwan raadkaygay.
Isbarbardhigga Solutions in la isticmaalo Google Play Music
Google Play Music app ee macruufka
Play Google ciyaaryahan internetka ee macruufka
Adeegga Type app adeeg online software desktop
Dhegayso music si toos ah uga Google Play Music
Download iyo sii music ku ay hindiseen
Aan ku xaddidnayn internet ku ay hindiseen
Maamul music on qalabka aad
Habboon in la isticmaalo
1. wanaagsan ee maaraynta music on qalabka
1. laguu suurogeliyo in aad sii files music ah
2. ogolaado in aad u ciyaaro offline music ah
1. xadidan oo ay ku xiran internetka ee
2. ma habboon in la isticmaalo